Ukuhlukunyezwa ngokocansi - abahlukumezi, babone izimpawu kanye nokunye okunye okusebenzayo
Ukwethuka nokuvuza - cocisana ngezindlela zomenzi wobugebengu nezingane
Indlela yokuvikela izingane ekuhlaselweni ngokobulili kwi-Intanethi?
Okuthiwa ukuphepha kwe-intanethi
Ukuxhashazwa ngokocansi kwezingane nentsha kuqala kuphi?
Izimpawu zokuhlukumeza ngokocansi
Yini okufanele uyenze uma ingane yakho ihlukunyezwa ngokocansi?
Okufanele ukwenze uma kukhona ukusola
Bonke abazali bafuna ukuvikela izingane zabo ngangokunokwenzeka ebudloveni nasekuhlukunyezweni ngokocansi. Kodwa ubani ongakhuluma ngalesi sihloko nabantwana nhlobo? Futhi yini ngempela oyilumkisa ingane yakhe ngokukhethekile? Ingabe kuyadingeka ukudalula yonke imininingwane noma kunemithetho embalwa eyisisekelo yokuvikela ingane ekuhlaselweni ngokocansi? Ngenxa yokuthi abahlukumezi bavamise amalungu omndeni, isihloko sokuhlukumeza ngokocansi kuyinkimbinkimbi kakhudlwana futhi kufanele sibhekane nokuzwela okukhulu. Kubalulekile ukudlulisela ingane ukuthi zonke izinkinga nazo zonke ukwesaba ziza kubazali ngaso sonke isikhathi.
Ukuhlukunyezwa ngokobulili - ukuvikelwa ngokuzethemba okukhulu
Izingane ezizikhukhumeza zingenakwenzeka ukuba izisulu zokuhlukunyezwa ngokocansi. Umngcele wokuvimbela umenzi wobugebengu ubonakala uphakeme lapha, njengoba esaba ukuthi ingane ingakwazi ukuzivikela noma ukubhekana nokuhlukunyezwa ekhaya. Ngakho-ke kubalulekile ukunikeza ingane yakho isithombe esihle kakhulu futhi uzinake izidingo zakhe ezingokwenyama futhi uzihloniphe. Lokhu kuqala ngokumanga komalume, okuyinto ingane enqaba. Ungalokothi uthintwe noma ucindezelwe, okwenza ingane ingakhathazeki.
Yeka ukuhlukumeza ingane
A "Akuyona into embi kakhulu, zidonsa ndawonye, ​​kungenjalo umalume uhlambalazwa" ngumbhede lapho inzalo yecala ikhula esikhathini esizayo. Ngoba ngisho noma angasebenzisa iziqubulo ezinjalo ukuhambisa ingane ezintweni angazifuni. Lokho ingane ifuna nokuthi yini engekho, iyinquma yona ngokwayo. Kudinga isibindi ukusho ukuthi umuntu akafuni ukuthintwa ngu-anti. Ngenxa yalokhu izingane zidinga ukuzethemba nokuzizwa kokukwazi ukubhekana nomzimba wazo.
Uma ingane yakho inamahloni futhi igodliwe, ungathuthukisa ukuzethemba kwakho ngezifundo ezikhethekile. Cishe wonke umuzi namuhla unayo, futhi ukuzivikela kubanikazi bezinkulisa kunikezwa ezinye izinhlangano. Akusho ukuthi inkulisa engakwazi ukuzivikela ngokukhululekile kumuntu omdala, kepha ulwazi ingane azuza kulokho kuyenza kube nokwethembela futhi nesibindi - ngakho-ke kuyisusa ekuhluphekeni.
Vikela ukuvuleka nemfundo!
Ubuhlobo obuhle nengane yakho yi-alpha ne-omega yokuba ingane yakho iqinisekise kuwe uma idinga. Ngesinye isikhathi, kufanele ukhanyise ingane yakho ngokuphathelene nobulili, evulekile futhi ngaphandle kokuhlazeka. Indaba nezinyosi kanye nezimbali ezincane sekuphele isikhathi eside.
Ingane ingachaza kuphela ukuthi yayazi. Ngakho-ke, vula kakhulu, unikeza zonke izingxenye zomzimba amagama angamagama futhi ungesabi ukuphendula imibuzo yengane yakho ngobuqotho.
Uma ingane yakho ibuza - futhi izobuza, ngoba zonke izingane ezivela eminyakeni ethile zinesithakazelo! - Lapho izingane zivela khona, zitshele ngokungakhethi ngangokunokwenzeka futhi ushiye isorkork ngaphandle. Kukhona manje izincwadi ezinhle zokukhanyisa nezincwajana ezisiza abazali ukuba banqume ubulili ngaphandle kokuvimbela.
Izingane ezineminyaka eyinhloko kufanele zikwazi ukuthi ukuhlukumeza ngokocansi kuyini. Chaza ingane yakho ngendlela ehlukumezayo ngangokunokwenzeka futhi ngaphandle kokwesaba ukuthi ukuxhashazwa ngokocansi kwenzeka kaningi. Kuyiqiniso ukuhamba ngezinyawo phakathi kokuxwayisa nokukhathazeka.
Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi utshele ingane yakho ukuthi ikhona, kodwa ayikho into eyenzekayo. Kodwa uma kwenzeka, kufanele ukhulume ngakho. Indlela evame kakhulu yabenzi bokuhlukumezeka ukuthulisa ingane. Uzokwenza izinsongo noma azame ukumangalela ingane. Noma wenza izithembiso futhi umvuza ingane ngokuthula kwakhe. Nalokho, ingane yakho kufanele ikwazi. Labo abazi izindlela bazothola kulula ukubona ukuthi ukuhlukunyezwa ngokocansi kuqale futhi bangazivikela ngokumelene nalo.
Ngoba ngokuvamile ukuhlukumeza ngokocansi kuqala ukuhamba ngezinyoni futhi akuveli kwesinye isibili kuya kwesinye. Umenzi wobugebengu uzwa indlela yakhe phambili nangesikhathi esifanele. Ngakho khuthaza ingane yakho ukuthi ikhulume ngokushesha nganoma yini engathandeki kuyo, ngisho noma isongelwa. Kumele wazi ukuthi ingavikelwa kuphela uma ikhuluma ngakho.
Ngaphandle kwezikhwama ezincane, i-intanethi inikeza nezigebengu ezishukumisayo ngokobulili isikhala esisha. Leli gumbi kufanele libhekwe njengalokhu ngabazali.
Ukuvikelwa kokuhlukunyezwa ngokobulili kwi-Inthanethi
Isimo sobugebengu: I-intanethi ngokwalo isetshenziselwa ukuhlala ingaqondakali, ngoba inokuthile okulungiselelwe, ukuthi impilo yangempela ayikwazi ukuyenza: ukungaziwa ngokuphelele futhi akukhofakazi. Ngakho-ke, ikakhulukazi lesi simo sobugebengu esisha sithandwa kakhulu.
Ngeshwa, izingane, ezingazazi kahle imithetho yaleli zwe elisha, yizona ezihlupheka kakhulu. Ngenhlanhla, kunemithetho embalwa eyisisekelo evumela ngisho nomncinyane ukuthi ahambe ngokuphepha ezweni lewebhu.
Ukungaziwa ngabenzi bokuhlukumezeka ngokuhambisana nokuvuleka kwezigameko
Abahlukumezi bangathola kalula izithombe, amakheli e-imeyli, izinombolo zocingo kanye namakheli ezisulu zabo ezingosini. Njengoba izingane nentsha zivame ukuzithumela emphakathini emakhasini adumile, kuyinto yokudlala yabantwana ngakho-ke ulwazi olulodwa alukwazanga ukujeziswa. Esikhathini esiningi, abenzi bokuhlukumeza basebenzise lolu lwazi ukuxhumana nabahlukunyezwayo, ngokuvamile bazenza babe bancane kunabo, futhi badukise izithakazelo ezivamile. Ngezinye izikhathi kubuye kuxoxwe ngamakamelo noma amaforamu womphakathi, okuxhumana ngawo okokuqala. Kulezi zinkundla, abantu abasha abanezintshisekelo ezivamile babuthana (isibonelo, izikhangiso lapho abantu abasha bangathumela khona izindaba zabo, ezibalwe), ngakho ukuxhumana nabo mayelana nokuzilibazisa okwabiwe kungabonakali nakancane. Umenzi wobugebengu uvame ukusebenzisa i-fake profile, okusho ukuthi idatha yakhe (usuku lokuzalwa, indawo yokuhlala, imfundo yesikole) ayihambisani nalokho okushiwo ngenhla.
Inkinga futhi ukuthi izingane eziningi nentsha zizwa zivikelekile ezindongeni zazo ezine. Izwe kuwebhu liyiqiniso, ngakho-ke ingozi ibuye ibonakale iyinqobo futhi ingatholi indlela yokwenza iqiniso. Kodwa ukuhlukunyezwa ngokocansi kuqale nini? Akuhlali ngaso sonke isikhathi emhlanganweni nomenzi wobugebengu ukukhuluma ngokuhlukunyezwa ngokocansi. Abanye abahlukumezayo bathumela izithombe ezenzelwe izisulu ngezisusa zobulili noma ama-movie anokuqukethwe ngokocansi - lokho nakho kuyisenzo sobugebengu, ngoba singaphazamisa ingane, omncane futhi ongenalwazi, kungethusa futhi kusabise. Ama-imeyili angcolile noma isicelo sokuthumela izithombe ngokwabo ubugebengu obugqugquzelwa ngokobulili.
Ukuhlukunyezwa ngokocansi endaweni yokusebenza akuyona into encane
I-wave ephelele yokugada ngokuphephile - Amathiphu wezingane
Okubaluleke kakhulu ukungaziwa. Ungathumeli ikheli lakho noma inombolo yocingo kwi-intanethi. Ungalokothi uthumele idatha yakho kumuntu ongaziwa, ungazitholi idatha yedatha noma izithombe zomndeni. Uma usebenzisa isiteketiso, akufanele iqukathe igama lakho langempela noma yembule iminyaka yakho, njengeLisa99. Kusukela kulokho, umlandu ungaphetha ngokuthi uLisa wazalwa ngonyaka ka xxxx. Sebenzisa izinombolo ezijwayelekile namagama. Emakhasini afana ne-Facebook uyaphawula okuningi uma ungasethi isithombe sakho. Qinisekisa ukuthi isithombe asiyena isimemo sabenzi bokugqugquzela ngokocansi.
Okuyiqiniso ngokumelene nendawo ebonakalayo. Inetha yindawo, indawo ngaphandle kwemingcele kanye namathuba angenamkhawulo. Konke kuphazamiseka lapha: kusuka kumngani omnandi phezu kwezigebengu ezincane kumphangi wasebhange nomntwana we-molester. Ngokuvamile izigebengu ezimbi kakhulu zigqoka ingubo engenacala kakhulu. Qaphela ukuthi akekho umngane ngemuva kokuxhumana okuhle.
Uma uthola okuthile okuhlekisayo, khuluma nabazali bakho ngakho. Ungalingwa ukwenza into ongafuni. Izithombe ezizimele nezinamba zocingo kanye nokuqokwa kwabahambi akuzona ezandleni zabangamazi.
Qaphela ukuthi abantu bangempela bafihle ngemuva kwamaphrofayela amancane. Akuwona wonke umuntu ungumngane - nokuthi ngabe iMickeyMouse17 ngempela uyindoda enhle nezwi elihle kakhulu elibiza ukuthi liyikungabaza.
Ayikho imihlangano nabangani be-intanethi. Ungalokothi uhlangane nomngane owaziyo kuphela kusuka ku-intanethi. Lapha kulandela enye yezingozi ezinkulu. Ungaphenduli izimemo zalesisihlobo! Ngokuphambene nalokho: Uma uzizwa uhlekisayo, kufanele ubike ngokushesha le phrofayela kumqondisi wesithangami. Okufanayo kusebenza uma umuntu ehlangana nawe ngokuqukethwe kocansi, kungaba amavidiyo, izithombe noma imibhalo eneziqondiso ezifanele. Umqhubi wesayithi angavula ngokushesha amaphoyisa.
Noma ubani okholelwa ukuthi ukuxhashazwa ngokocansi kwezingane nentsha kuzoqala kuphela uma kuziwa kwindlela ethile yesenzo socansi akulungile. Kodwa lapho ukuhlukunyezwa ngokobulili noma ukuhlukunyezwa ngokocansi kuqale ngempela? Ngokusobala awukwazi ukudweba lo mkhawulo ngokucacile. Noma kunjalo, noma yini ephula isithunzi nentando yomntwana ngokusobala isenzo sobugebengu.
Ukuvikelwa ekuhlukunyezweni ngokocansi kwezingane
Ngalolo ncazelo, lokhu kungase kube nokubukeka okucacile noma amazwi amanyala. Umphakathi wethu ukhululekile kakhulu ngalolu daba, okuyinto enhle kakhulu ngakolunye uhlangothi, futhi wonke umuntu osebenza ezikhungweni zemfundo uyakunaka. Kodwa futhi kuholela eqinisweni lokuthi iningi obaba baqhubeka bevimbela nezingane zabo, ukuze bangenzi lutho olungalungile.
Ukuhlukunyezwa ngokobulili ekuboniseni kwayo
Ekuqaleni ukuhlukunyezwa. Emakamelo okuxoxa noma amaforamu abantwana noma abasha bathunyelwa amavidiyo noma izithombe ezinokuqukethwe okungcolile. Ngezinye izikhathi babuzwa ukuba benze izenzo zobulili ngokwabo, ikakhulukazi nge-Skype, ngakho-ke lowo owenza iphutha angabuka. Ezinye izinhlobo zokuhlukunyezwa zifaka isikhalazo emgwaqeni noma ukuphindaphinda amagama okucansi nokuqukethwe okucacile.
Isinyathelo esilandelayo sithinta ingane. Umenzi wobugebengu udinga ukuthintwa yingane endaweni yokushicilela, uyithinte ngokwakhe noma umkhuthaze ukuba azithinte futhi amvumele ambone. Ukuthinta kungaholela ekudlwengulweni kanye / noma kufaka yonke imikhuba yobulili. Yiqiniso, izithombe ezingcolile zezingane ziyingxenye yokuhlukumeza ngokocansi kwezingane kanye nentsha. Lapha, ingane iphoqeleka ukuba igxilile futhi ifake ifilimu bese ithatha isithombe. Ngezinye izikhathi kuphoqeleka ukuba ubukele izithombe zobulili ezingcolile kanye nama-movie noma ukubuka imikhuba yabanye. Amafomu okuhlukumeza ngokocansi ahlukene kakhulu njengamafilosofi wezingane ezihlukumezayo!
Kungani kungavamile ukuboniswa?
Ukuhlukunyezwa ngokocansi kuyaphakama kakhulu. Lokhu kubangelwa ukuthi abahlukumezi ngokuvamile bavela emvelweni wengane. Ezimweni eziningi, ngeshwa amalungu omndeni asebenzisa amandla awo phezu kwengane. Umntwana usebudlelwaneni bokuthembela, engqondweni nangokomzimba, futhi akakwazi ukumelana nokuhlukunyezwa ngokocansi isikhathi eside. Ngisho noma ikhetha ukukhuluma nomunye umuntu omdala emndenini, ngokuvamile ayikho emaphoyiseni. Iqiniso liwukuthi, ukusondelana kwengane kumuntu owenza umenzi wobugebengu, cishe kungenxa yokuthi icala lizobikwa futhi lihanjiswe enkantolo. Iqiniso liwukuthi namanje amantombazane yizisulu zesenzo sobugebengu. Abesilisa abesilisa abavamise ukuvame ukuvela endaweni eseduzane noma abasondelene nabo.
Njengoba izisulu zihlala zithule isikhathi eside, kunzima kakhulu ukubona ukuxhashazwa ngokocansi. Uvame ukuqaphela uma sekuphuzile kakhulu futhi sekuvele khona izimpawu zengqondo noma zomzimba. Kunezibonakaliso eziningana ezingabonisa ukuhlukumeza ngokocansi, kodwa akusho ukuthi zibonisa.
Yiziphi izibonakaliso ezijwayelekile zokuxhashazwa ngokocansi?
Ikakhulukazi ngalolu daba, abaningi anqikaze, wake khuluma izinsolo ngenxa yenkambo eyodwa ngokuvamile has ukulwa wamangalela eliyingqayizivele ngezinsolo futhi ngokuvamile ungalokothi avuselelwa ngempela futhi. Nokho, kungaba kuphela ngezinhloso izisulu ukuveza kanye kunalokho usola okungaphezu kwalokho ukuhlukumeza ukunganakwa, ukuhlupheka izisulu iminyaka.
Izinguquko zokuziphatha zisola!
Izinguquko zokuziphatha ngokuvamile ziyisibonakaliso sokuqala sokuhlukumeza ngokocansi. Lokho akusho ukuthi noma yikuphi ukungajwayelekile kokuziphatha kusekelwe ekuhlukunyezweni ngokobulili. Ngokufanayo, ukuthukuthela nabangane, ukungena esikoleni noma ukulahlekelwa umuntu oseduze kungabangela lolu shintsho ngokuziphatha. Futhi, ezinye izinqubo zokufunda nezinyathelo zokuthuthukiswa ngokuvamile zibangelwa ukungajwayelekile kokuziphatha okwesikhashana.
Ukubuka okuqondile kuvame ukunikeza ulwazi, kodwa omunye akufanele akhohlwe ukuthi zonke izingane ziphatha ngokuhlukumeza ngokuhluke ngokusho komlingiswa, iminyaka, umenzi wobugebengu nomthethosisekelo. Okubalulekile: Okungajwayelekile kakhulu kubonakala, ukusola kunzima kakhulu!
Ukuhlukunyezwa emaphethweni wokuziphatha ebuntwaneni
Izimpawu eziningi zisola futhi kumele zixwayise abazali. Lezi zihlanganisa ikakhulukazi izinsana: iziyaluyalu ubuthongo nesenzakalo lelitfutfukile amaphupho amabi, bedwetting noma wamathumbu ukunyakaza ngemuva nokunwetshiwe Saubersein, ukwesaba entsha noma zokwesaba ngokuvamile, ukuziphatha whiny, ekuhlehleni nokuziphatha kobuntwana ukuthi umntwana empeleni ebeligciniwe (isibonelo, isithupha oncelayo, umntwana inkulumo) isidingo kwandisa ukuphepha, ukungakuthandi ukudla noma izifiso, ukungabi contact, ukwesaba nobudlelwane bokuhlalisana, ashona ezweni siqu, inzalo yayo ehlukile emizimbeni yezinye izingane kanye nabantu abadala, elise ifomu ekhethekile futhi libonisa umdlalo (izenzo zocansi zivame kushintshwe umdlalo noma isihloko yomdlalo), ukulahlekelwa isithakazelo ezintweni ezinhle.
Ezinganeni ezindala zivame unezinye kwezinso kunezelwa, okungase isukela ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngobugebengu, ukucindezeleka, ecabanga ukuzibulala, ukuphazamiseka kwemikhuba yokudla ukwehla ekusebenzeni esikoleni. Ngokuvamile intsha enjalo ibonisa nokuziphatha okubi ngokobulili.
Izimpawu zomzimba zokuhlukumeza ngokocansi
Ngaphandle kokushintshwa kokuziphatha okukhulunywe ngaye ngenhla kuvame ukubonakaliswa ngokomzimba, okuyinto eyedwa kodwa ngokuvamile enganiki ubufakazi obufanele bokuxhashazwa ngokocansi. Ngokuvamile basolisa kuphela mayelana nokungaqondakali kwengqondo. Ubuhlungu besisu, ubuhlungu esiswini, nokulimala, igazi umchamo (ngoba kwesinye izifo) noma wamathumbu ukunyakaza (by fistulas anal) kungenzeka okukhwantabalisayo futhi ucishe ayinangozi ngokwemvelo, kodwa ngokuvamile izimpawu yokunukubezwa ngokobulili. Ahlotshiswe zihlanganisa ubuhlungu endaweni zangasese, ukulunywa njalo, ukulimala besisu, ezifweni ezithathelwana ngobulili ukuze ukukhulelwa okungafunwa.
Ukuhlukumeza ngokocansi kungabonakaliswa lapho ingane ikhuluma ngomuntu omdala, noma uma ivele ibonisa izimpawu ezibonakalayo futhi abazali beba nokusola futhi baqale ukuphenya.
Ukuphelelwa amandla ngokuvamile kuvame ukushaqeka! Yini manje? Ngiya phambili kanjani ukuvikela ingane yami futhi ngijezise umenzi wobubi? Uma ingane ishaya kakhulu ngale ndaba, ngokuvamile iyoyibhala noma iyenze ngeziqephu. Kunezimbonakaliso eziningi ezibonisa ukuhlukumeza ngokocansi futhi zichaziwe kwenye indawo.
Kubaluleke kakhulu ukuthatha ingane ngokungathí sina uma isho ukuhlukunyezwa. Ezikhathini ezimbalwa kakhulu izingane zicabangela into enjalo. Ngakho-ke bathatha zonke izinkomba ngokujulile, kodwa kungabonakali futhi kubhalwe ngekhodi.
Izimpawu zokuhlukunyezwa ngokocansi kwengane
Ukwenza izinto zibe zimbi nakakhulu, ukuthi izingane ngokuvamile azikhulumi ngoba umenzi wobubi uvela endaweni eseduze, ngokuvamile ngisho nasemndenini wabo! Lokho kungaba njalo ukuvimbela okukhulu izingane!
Hlala uphinde uqinise ingane!
Hlala uqinile, ngisho noma kunzima. Ingane isesimweni lapho ezwa khona engazi lutho, edidekile futhi enecala. Akuvamile ukuthi labo abahlukumezayo ngokwabo basolula ingane.
Kubalulekile ukuthola usizo lobuchwepheshe ngokushesha ngangokunokwenzeka. Bangakwazi ukududuza, ukuqinisa, ukuvikela nokubamba ingane yakho, kodwa kuphela izazi ze-psychologists kanye nabachwepheshe abaqeqeshwe ukuphatha umonakalo ongokomqondo wokuthi noma yikuphi ukuhlukumeza okushiya. Basiza abazali kangcono ukuba babhekane nokuhlukumeza ngokocansi kwengane yabo futhi bangabhekisela ezimweni ezinzima nokuthi bangabhekana kanjani nazo.
Njengomzali, ungamsiza ingane ngokusebenzisa isimiso esivamile ngangokunokwenzeka. Ngisho noma kubonakala kungabonakali futhi kungalungile, umkhuba uhlinzeka ngokuphepha futhi kusiza ingane ukuba ikwazi ukubhekana nokuhlangenwe nakho okubuhlungu.
Ngezinye izikhathi kuqala ngokusola okuphelelwa yisikhathi ukuthi maduzane kunzima. Uma ingane ingakhulumi ngokuhlukunyezwa ngokocansi ngokwayo, akufanele uyihlasele ngemibandela eqondile, ngoba kungenjalo kungenzeka ukuthi ingane ivala ngokuphelele.
Ake ngikuxoxele ingane mayelana osukwini lwakhe, ngokuningiliziwe ngaphezulu kokujwayelekile, ulalelisise ukuthi ukhuluma zokuphola izigameko ezingezinhle. Abanye neze - ngempela neze - ingane isihlamba isiqubulo esithi: "Kumelwe Kodwa ukuthi wayethathe kakhulu ethi" Noma okubi nakakhulu: "Kungani ukuba uvumele ngoba bewile" futhi "Bengingafisa endaweni yakho ... "
Izitatimende ezinjalo ziphinde zikhuthaze unecala lomntwana futhi zibuhlungu nakakhulu emva kwalokho. Kubiza ingane isibindi esikhulu ukubhekana nokuhlukunyezwa. Uma usuphumile ekushaqweni kokuqala, kufanele, njengoba kushiwo ngenhla, cela abasebenzi abakhethekile usizo. Ezimweni eziningi, lokhu kuhlanganisa namaphoyisa, ngoba ukuhlukunyezwa kwengane kuyisenzo esibi kakhulu okumelwe sijeziswe ukuvikela zonke ezinye izingane kulolu bugebengu. Kumelwe kanjani ukuthi amaphoyisa ahileleke kanjani futhi uma kwenziwa kanjani ukuze kuzuze ingane ngokubonisana nabachwepheshe bezengqondo.